बाँस रहे बासुरी ( सन्धर्भ पोखरा को )
भदौको पहिलो हप्ता कामको सिलसिलामा पोखरा भ्रमणको साइत जु¥यो र त्यता लागे“ । म काठमाडौं बस्छु तर ८–१० वर्षदेखिको भ्रमण इतिहास हेर्दा वर्षमा १–२ चोटी पोखरा नियमित आऊ जाऊ गर्नेमा म पर्दछु । पोखरा बढी जानुमा मेरो काम जो पर्यटकलाई नेपाल घुम्न सहयोग गर्ने हो त्यो पनि एउटा कारण हो भने अर्को नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको रोजाइमा पोखरा र आसपासका डा“डा र भञ्याङ्ग पर्नु पनि हो ।
नेपालमा प्रकृतिले संसारका अन्य भाग भन्दा अग्ला पहाडहरु दिएको छ ।
अग्ला १४ शिखरहरु मध्ये ८ नेपालमै पर्दछन् । अग्ला पहाड, त्यहा“का वनस्पति, भौगोलिक अवस्था, जनजीवन, संस्कृतिहरु नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ । पूर्व कञ्चनजङ्गा देखि पश्चिममा अपि हिमालका हाम्रा सबै हिमाल, पहाड र तराइका भूभागहरु पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्ने छन् । यति सानो क्षेत्रफलमा जो विविधता छ त्यो नै हामीले प्रकृतिबाट प्राप्त अमुल्य उपहार हो जसलाई हाम्रा पूर्खाले हामीलाई सुम्पिएर गए ।
नेपालमा प्रकृतिले असाध्यै राम्रा ठाउ“हरु उपहार दिएको भएपनि रारा, डोल्पा, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग पुग्न छिटो र सुरक्षित उपायहरु छैनन् । त्यसकारण पनि पोखरा नै बढी जाने आउने गरेको हुनुपर्दछ मैले ।
पोखरा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको प्रमुख रोजाइमा पर्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । पश्चिमाञ्चलमा पर्ने प्रसिद्ध अन्नपूर्ण राउण्ड, अन्नपूर्ण वेसक्याम्प, धौलागिरी, पुनहिल, जोमसोम, रोयल र अन्य थुप्रै पदयात्राको सुरुवात पोखराबाट नै हुन्छ । ताल, हिमाल, मठमन्दिर र देशकै दोस्रो ठूलो सहर भएर हुनुपर्दछ पोखराको उचाइ नेपालका अन्य सहरको भन्दा उचो छ ।
साराङकोटको डा“डामा कति नेपाली चलचित्रका सिन खिचिए, कति गीतकारले पोखराको वर्णन र विम्ब प्रयोग गरेर कति साहित्य लेखे त्यो फेवातालमा तैरिने माछापुच्छ«े जस्तै स्पष्ट छ ।
पोखरा प्राकृतिक रुपले यति भरिपूर्ण छ कि यसको नाम सुन्दा नै स्वदेशी र विदेशीलाई मनभित्रैबाट आनन्द उर्लेर आउ“छ । विद्यालयहरुको शैक्षिक भ्रमण देखि विदेशी संघ संस्थाका तालिम र गोष्ठी देखि नवविवाहित थुप्रै नेपालीहरुको हनिमुन गन्तव्य पनि पोखरा नै हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि पोखरा आऊ जाऊ गरिरहेको मलाई पछिल्लो भदौको पहिलो हप्ताको पोखरा भ्रमणले केही झस्कायो । पोखरा भ्रमणका क्रममा आफूले देखेका र प्रत्यक्ष्ँ भोगेका अनुभवहरु सचित्र वर्णन गर्ने जमर्को गरेको छु ।
फेवाताल लगायतका ताल तलैयाहरु माथी मानविय उत्तरदायित्व पटक्कै छैन । तल प्रस्तुत गरिएका यी दुई फोटाहरु जुन म आफैले भ्रमणको समयमा कैद गरेको हो, यि आफै बोल्दछन् ।
१) फेवातालमा ढल मिसाइएको चित्र
२ जलकुम्भीले ढाकेको फेवाताल
फेवाताल पोखराको आ“खा हो जसमा पर्यटकहरुले माछापुच्छ«े तैरिएको हेर्न अर्को विश्वबाट यहा“ आउछन् कि यसले माछापुच्छ«को रिफ्लेक्सन आउ“दा दिनहरुमा फेवातालमा देखिन गाह्रो छ । साथै दृश्यमा देखिएका जलकुम्भी र अन्य झारपातले डुङ्गा नै पार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । अव यसलाई के भन्ने ? नेपाली उखान माल पाएर चाल नपाए जस्तै हो यो । हामी घरका ढल फोहर खुलेआम तालमा फ्याक्छौ, ताल तलैया सरसफाइमा हामी अनिच्छुक छौं । यो प्रकृति माथिको ठूलो अपराध हो । सके सफा गरौं नसके फोहर त नगरौं ।
आज काठमाडौको छातीमा बग्ने नदीहरु वाग्मती, विष्णुमति हाम्रो सभ्यताको बेइजेत गर्दै बगेका छन् किनकी हामी काठमाडौंबासीले उनीहरुलाई पो कहा“ इज्जत दियौं र ? फेवाताल लगायतका ताल तलैया र जलासय क्षेत्र जो पोखरामा छन् उनीहरुको स्थिति काठमाडौमा बग्ने विष्णुमती, बाग्मतीको जस्तो हुनबाट बेलैमा रोक्नुपर्दछ । बा“स रहे बा“सुरी रहने न हो । प्रकृति नै नरहे यहा“ पर्यटक रहलान् र ? पर्यटक त अर्को पाटो हो आर्थिक फाइदाको सर्वप्रथम त जो हामी यी खोला, नाला, तालका जन्म र मृत्युका साक्षी हो, सो नै यस बाट उत्पन्न हुने समस्याका भागिदार हौं ।
अब विलम्ब नगरी जलवायु सफा राख्न नेपाल सरकारले कडा कानुन बनाउन आवश्यक छ । हामी नेपालीहरुमा वातावरण सम्बन्धी चेतना दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवहरु वाग्मतीमा पसेर सफा गरेका कयौं पछिल्ला उदाहरण छन् तर सेलिब्रेटी शैलीमा खोलामा पस्नुले पनि राम्रै सन्देश त दिन्छ तर अझ नीति नियममा कडाइ र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ ठूलो पक्ष हो ।
पोखरामा हालै भइरहेको बढ्दो सहरीकरण अर्को समस्याको रुपमा देखिरहेको छ । सहर र आसपासका डा“डाकाडामा घर निर्माण व्यापक मनोमानी छ । भौगोलिक हिसावले कमजोर भूअवस्था रहेको पोखरामा मापदण्ड विपरितका थुप्रै घरहरु छन् । थोरै जग्गामा अग्ला घरहरु निर्माण गर्ने र छिटो आर्थिक लाभ लिने नराम्रो रोगले पोखरा सिकार भएको छ । भ्रमणको क्रममा देखिएको लेकसाइडको एक वस्ती यसको उदाहरण हो ।
यस्तै तालको छेउछाउ र डा“डाकाडामा पर्यटकीय होटलहरु जे बनिरहेका छन् तिनको उचित अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जथाभावी व्यक्तिको मुड अनुसारका घर होटल बनाउन दिदा त्यसले पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतामा असर त पार्छ नै । अझ भौगोलिक हिसाबले कमजोर भूअवस्था भएको ठाउ“ जहा“ सेतीले वर्षेनी कटान गरेको र दिनानुदिन जमिन भासिएको समाचार आउछ, यस्ता ठाउमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले अझ ठूलो नोक्सान ल्याउन सक्दछ ।
पोखरा जस्ता ठाउहरुलाई फरक व्यवस्थापनको जरुरत छ । सबै किसिमका आवास निर्माण र बोट विरुवाको उल्लेख्य रोपण, फराकिला सडक, बहुभाषिक साइनबोर्ड, सुरक्षाको प्रत्याभूति, सरल यातायात आदिले यसलाई विश्वको ग्रेट ग्रिनसिटी, इकोसिटी बनाउन सक्दछ । केवल हामीमा इच्छाशक्ति र अनुसासन हुनपर्दछ ।
पोखरा र पटके कर पोखराको पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन् । लेकसाइडबाट पामे जाने बाटोमा एक युवकले म चढेको गाडीमा जतिचोटी सो बाटो गाडी गुड्यो उतिचोटी शुल्क असुले । एकचोटी तिरेको रसिदले एक दिनलाई पनि हुदो रहेनछ । ५–५ मिनेटको अन्तरमा ओहोर दोहोर गर्दा किन नहोस प्रत्येक चोटी आउ जाउ गर्दा तिर्नुपर्ने रहेछ । कुनै अफिस छैन, न साइनबोर्ड छ, एक युवक कानमा मुन्द्रा लगाएर बाटोको कुनामा बसेका छन् पैसा असुलेका अन्य बाटाहरु विश्व शान्ति स्तुपाको आसपास लगायत मुल सडकबाट १–२ कि.मी. भित्र छिर्दा त्यस्ता पटके कर असुल्ने युवाहरुको ठूलो जमात नै रहेछ । एउटै सहरका गल्लीहरुमा गुड्दा पटक पटक शुल्क बुझाउदै हिड्दा समय र धनको ठूलो लुट भएको जस्तो लाग्यो ।
बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर जस्तै कुरा पटके करमा पैसा तिर्नु पर्दाको पिडा मात्रै छन् । यसले समाजका युवाहरुलाई मेहनत गरी पैसा कमाउनको साटो बाटो ढुकेर पैसा असुल्न प्रोत्साहन गरेको छ । नत्र २–४ कि.मी. वरीपरी गल्ली पिच्छे शुल्क असुल्नको औचित्य के त ?
स्थानीयलाई अनावश्यक रुपमा शक्तिशाली बनाउनु हुदैन । यस्ता खाले प्रवृत्तिहरु हाल नेपालमा बढ्ता छ जस्तै पोखराबाट नजिकैको घोरेपानी जो पुनहिल ट्रेक्किंग को ढोका हो ,यहा“ बाह्य लगानीकर्ता गएर आफ्नो अनुसार आर्थिक शक्ति लगानी गर्ने वातावरण छैन । स्थानीयको कब्जामा हाम्रा पर्यटकीय रुटहरु कैदी भएका छन् । स्थानीयले स्तरीय वासस्थान र खानपिनको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थिति छ र गर्न सक्नेलाई जान दिने वातावरण छैन । पुरै सिन्डिकेट र दादागिरी छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै पदयात्रा अनुमति पत्र लिएर पुनहिल पुग्दा जम्मा ३–४ दिनको भ्रमणमा फेरी पुनहिलमा स्थानीयको अर्को परमिट नलिइ सुखै छैन । जुन लिएर मात्र पुनहिलको डाडोमा प्रवेश पाइन्छ । यसलाई के भन्ने ? दोहोरो सत्ता वा अराजकता ? पोखरामा सुरु हुने पटके कर, विभिन्न रुपमा म्याग्दीको पुनहिल हुदै जोमसोमको लोमाङथाङ सम्म पुगेको छ ।
पोखरामा ट्याक्सीहरु मिटरमा हिड्नु भनेको घाम पश्चिमबाट उदाउनु जस्तै हो । ताकी यो असम्भव जस्तै छ । जसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरु पोखरामा गुड्ने ट्याक्सीबाट दिनदहाडै ठगिन्छन् । अध्यारोमा ढुङ्गा हाने जसरी हाउ मचमा यात्रुहरुलाई हिड्न किन वाध्य पारिदैछ ? कास्की जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक कार्यालयले ढिला नगरी यो उत्तर दिनुपर्दछ ।
समस्या अरु धेरै छन् र राम्रा कुराहरु पनि धेरै छन् र होलान् पनि तर यात्राको सिलसिलामा सरसर्ती देखेका र भोगेका यी मेरा अनुभव र भोगाई पोखरालाई निरोगी सहर सफा सहर, नियम र कानुनले बास गरेको सहर बनाउ भन्ने हो । काठमाडौं जस्तै अव्यवस्थित सहरको सिको पोखराले नगरोस् । विश्वलाई लोभ्याउने स्वर्गको टुक्रा जस्तो पोखरा हामीले भोलिको पुस्ता र त्यहा“ घुम्न जाने पर्यटकको उत्तिकै सुन्दर र सुरक्षित राख्न सकौ भन्ने हो ।